कोलस्ट्रोल भनेको के हो ? कसरी घटाउने ? TG बढे के गर्ने ? डाक्टरको सुझाव यस्तो छ:: Naya Nepal
कोलस्ट्रोल भनेको के हो ? कसरी घटाउने ? TG बढे के गर्ने ? डाक्टरको सुझाव यस्तो छ
कोलेस्ट्रोल भनेको हाम्रो रगतमा हुने बोसोयुक्त मोलिक्युल हो । यसको अभावमा हामी जीवित रहनै सक्दैनौं । हाम्रो शरीरले कोलेस्ट्रोललाई एउटा गद्दाको रुपमा उपयोग गरिरहेको हुन्छ । यसले हाम्रो कोषका बाहिरी पत्रलाई ढाक्नुका साथै स्नायु फाइबरहरुको तापक्रमलाई स्थीर राख्नका लागि जोगाउने काम तथा मस्तिष्कबाट सही ढंगले सूचनाहरुका आउने जाने काममा सहयोग पनि गरिरहेको हुन्छ ।
कोलेस्ट्रोल हाम्रो इन्डोक्राइन प्रणालीको आधारभूत हिस्सा पनि हो । एस्ट्रोजीन लगायत सबै स्टेरोइडड हर्मोनहरु उत्पादन हुने काम कोलेस्ट्रोलकै सहयोगबाट भइरहेको हुन्छ । सामान्यतः हामीलाई के लाग्न सक्छ भने कोलेस्ट्रोल भनेको रगतमा हुने बोसोजस्तो चीज हो, जसको शरीरमा कुनै काम नै छैन । तर वास्तवमा हाम्रो शरीरका हरेक कोषहरुमा कोलेस्ट्रोल हुन्छन् । हाम्रो मस्तिष्क, छाल र अन्य अंगहरुलाई आफ्नो काम गर्नको लागि कोलेस्ट्रोल नभई हुन्न । तर यसको अर्थ यो होइन कि शरीरमा जति कोलेस्ट्रोल भए पनि केही हुन्न ।
रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्दै जाँदा त्यो रक्तनलीका भित्ताहरुमा टाँसिन जान्छ । यसले गर्दा रक्तनलीहरु कडा तथा साँघुरो हुन जान्छ । त्यो जम्दै जाँदा रगत जाने बाटो साँघुरो हुने मात्रै हैन, थुनिने पनि हुन्छ जसले गर्दा हृ’दयघा,त तथा मस्तिष्कघा,त हुने खतरा बढेर जान्छ ।
कोलेस्ट्रोल घटाउने केही खानेकुरा
माछा : माछा खानेहरुका लागि खुसीको कुरा हुन सक्छ, चिल्लो बढी भएका माछाहरुमा पाइने ओमेगा ३ ले शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउन तथा स्वस्थकर कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउनमा सहयोग पुर्याउँछ । ओमेगा ३ ले अनियमित चालबाट मुटुलाई बचाउने काम गर्छ भने त्यसले रगतमा भएका ट्रिग्लिसेरिड्सहरुलाई पनि घटाइदिन्छ ।
भण्टा : कोलेस्ट्रोलका समस्या हुनेहरुका लागि भने बैगुन अत्यन्तै लाभदायी हुने गर्छ । बैगुनले शरीरमा कोलेस्ट्रोल घटाउन सहयोग गर्छ ।
भटमास : कोलेस्ट्रोलको समस्या हुनेहरुले खानैपर्ने अर्को खानेकुरा भटमास पनि हो । भटमासले एलडीएल अर्था्त लोअर डेन्सिटी लिपोप्रोटिन भनिने खराब कोलेस्ट्रोललाई घटाउने काम गर्छ ।
स्याउ : कोलेस्ट्रोलको समस्या हुनेहरुका लागि चाहिँ स्याउको सेवनले निक्कै फाइदा पुग्न सक्छ । विशेष गरेर स्याउमा पाइने पेक्टिन भन्ने घुलनशील फाइबरले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउन सहयोग गर्छ ।
ओखर र बदाम : ओखर तथा बदामका फाइदाहरु मनग्गे छन् । तीमध्ये पनि झट्ट हेर्दा मस्तिष्कको प्रतिरुप जस्तो देखिने, ओमेगा ३ लगायत शरीरका लागि बहुउपयोगी तत्वहरुले भरिपूर्ण ओखर अनि बदामहरुको सेवन खराब कोलेस्ट्रोल घटाउनका लागि सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ । त्यसबाहेक, ओखर बदाम, काजु, पिस्ताहरुको सेवनले मुटु स्वस्थ राख्न पनि सहयोग गर्छ ।
एभोकाडो : फलहरुको नाम लिँदा फाइदाका हिसाबले अग्रपंक्तिमा नाम आउने फल हो एभाकाडो । यसका फाइदाकै कुरा गर्दा एभाकाडोको नियमित सेवनले शरीरको खराब कोलेस्ट्रोल प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण हुने गर्छ ।
हामीले थाहा पाएकै कुरा हो, केरामा पोटासियम प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । तर हामीमध्ये कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, एभाकाडोमा केरामा भन्दा पनि बढी पोटासियम पाइन्छ । सम्भवतः यो कुरा बताइबस्नु जरुरी छैन, पोटासियमले मुटु स्वस्थ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ ।
सूर्यमुखीको तेल : शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल बढ्न नदिन वा घटाउनको लागि सूर्यमुखीको तेल, जैतुनको तेलहरु राम्रो विकल्प हुन सक्छ । तेल वा चिल्लो खाद्यको कुरा गर्दा ख्याल गर्नैपर्ने कुरा के हो भने त्यो जम्ने खालको हुनुहुँदैन ।
चिया : दूध हालेको भन्दा पनि फिक्का वा हरियो चियाको सेवन कोलेस्ट्रोल घटाउनको लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।
विशेषज्ञ डाक्टर तारा कोइरालासंग कोलेस्ट्रोलको विषयमा गरिएको यो कुराकानी